I-Galaxy ye-Milky Way: Oko Siyazi Ngayo
IConos yethu encinci yeCosmos
Xa sibheke phezulu emazulwini ngobusuku obucacileyo, kude nokungcola kokukhanya kunye nezinye iziphazamiso, sinokubona i-milky bar yokukhanya ejikeleza esibhakabhakeni. Yile ndlela ikhaya lethu lomkhosi, iMilky Way, lafumana igama layo, kwaye libukeka njani ngaphakathi.
I-Milky Way iqikelelwa ukuba iphakathi kweminyaka eyi-100 000 neye-120,000 ekukhanyeni, ibe iqulethe phakathi kweenkwenkwezi ezingama-200 ukuya ku-400 ezigidi.
Ukufunda i-galaxy yethu kunzima, kuba asikwazi ukuphuma ngaphandle kwaye sibuke emva.
Sifanele sisebenzise ubuchule bokuqhelanisa. Ngokomzekelo, sijonge kuzo zonke iindawo ze-galaxy, kwaye senza njalo kuzo zonke iindidi zamayeza ezikhoyo. Inomathotholo kunye namacandelo e- infrared , umzekelo, sivumele ukuba sibukelele kwimimandla yegalaxy egcwele igesi kunye nothuli kwaye sibone iinkwenkwezi ezibekwe ngaphesheya. Ukukhutshwa kwe-X-ray kusitshela malunga neendawo ezisebenzayo kunye nokukhanya okubonakalayo kusibonisa apho iinkwenkwezi ne-nebula zikhona.
Emva koko sisebenzisa iindlela ezahlukeneyo ukulinganisa imida kwizinto ezahlukahlukeneyo, kwaye siqulunqe yonke le ngcaciso kunye kunye nokufumana ingcamango apho iifwenkwezi kunye namafu egesi afumaneka kwaye yintoni "isakhiwo" esikhona kwi-galaxy.
Ekuqaleni, xa oku kwenziwayo iziphumo zibonise isisombululo sokuba i-Milky Way ibe yindlala . Nangona kunjalo, ekuhlaziyweni okuqhubekayo kunye nedatha eyongezelelweyo kunye nezixhobo ezibucayi ngakumbi, izazinzulu ngoku zikholelwa ukuba ngokwenene siphila kwisigaba esincane semiqolo yomoya eyaziwayo njengemigqatsha ejikelezayo.
Le milalane ihambelana ngokufanayo kunye nemigqa yendima evamile ngaphandle kokuba ibincinane "ibha" enye idlula kwi-galaxy apho iingalo ziqhubeka khona.
Kukho abanye, nangona kunjalo, bathi, nangona isakhiwo esinqandekileyo esithintekayo sithandwa ngabaninzi, ukuba siza kwenza iMilky Way ihluke kakhulu kwezinye iindidi ezivaliweyo ezithe sasizibonayo kwaye kusenokwenzeka ukuba kunokuba siphila kwindawo engavumelekanga galaxy .
Oku akunakwenzeka, kodwa kungekho ngaphandle kwendawo.
Indawo yethu eMilky Way
Isistim sethu selanga sisendaweni yesibini kwisithathu kwendlela yokuphuma kwinqanaba le-galaxy, phakathi ezimbini kweengalo zomoya.
Oku kunene indawo enkulu ukuba ibe yindawo. Ukuba phakathi kwinqanaba elingaphakathi lingayi kuba likhethekileyo njengoko ubunzima beenkwenkwezi buphakamileyo kakhulu kwaye kukho izinga eliphezulu kakhulu le- supernovae , kunemihlaba engaphandle ye-galaxy. Ezi zinyaniso zenza i-bulge encinci "ikhuselekile" ekusebenzeni ixesha elide lobomi kwiiplanethi.
Ukuba kwelinye leengalo zokuvusa akukho konke okulungileyo, nokuba zizathu ezininzi. Ubunzima begesi kunye neenkwenkwezi ziphakame kakhulu apho, ukwandisa amathuba okudibanisa ne-system yethu yelanga.
Ubudala beMilky Way
Kukho iindlela ezahlukeneyo esizisebenzisa ukuqikelela iminyaka yobuGalaxy yethu. Izenzululwazi ziye zasebenzisa iindlela zokuqhawula iinkwenkwezi ukuze zihlawule iinkwenkwezi zakudala kwaye zifumene ezinye ezineminyaka eyi-12,6 yezigidigidi (ezo zigaba ze-globally M4). Oku kubeka umda ophantsi kwexesha.
Ukusebenzisa amaxesha okupholisa abantu abadala bamhlophe abanikezelayo banika uqikelelo olulinganayo lwe-12.7 billion iminyaka. Ingxaki kukuba ezo zinto zenza izinto ezidlulileyo kwi-galaxy yethu engayi kuba nayo ngexesha le-galaxy.
Amancinci amhlophe , ngokomzekelo, ama-stellar remnants adalwe emva kokufa kweenkwenkwezi enkulu. Ngoko uqikelelo aluthabathi malunga nexesha lobomi beenkwenkwezi zenkwenkwezi okanye ixesha elithathiweyo kwifom leyo nto.
Kodwa kungekudala, indlela yasetyenziselwa ukuqikelela iminyaka yobudala obomvu. Ezi nkwenkwezi zihlala ubomi obude kwaye zidalwa ngobuninzi. Ngoko kulandelelana ukuba ezinye ziza kudalwa ezinsukwini zakuqala ze-galaxy kwaye ziya kuba zijikeleze namhlanje. Omnye usanda kufunyanwa kwi-halo ye-galactic ibe malunga ne-13.2 yezigidigidi ubudala ubudala. Le nto iphela malunga nesiqingatha sezigidigidi emva kweBig Bang .
Ngethuba eli liqikelelo lethu elihle lomqolo wethu wegalaxy. Ngokuqinisekileyo kukho iziphene eziphambili kule milinganiselo njengoko iindlela, ngelixa zixhaswa ngezesayensi ezinzulu, azikho ubungqina bombutho ngokupheleleyo.
Kodwa unikwe ubungqina obukhoyo obu bubonakala bunengqiqo.
Kwakudala becinga ukuba i-Milky Way yayikwiziko leMveli. Ekuqaleni oku kwakungenxa ye-hubris. Kodwa, kamva, kwakubonakala ngathi zonke izikhokelo esizijonga ngayo yonke into yayisuka kude nathi kwaye sibona umgama ofanayo kuzo zonke izikhokelo. Oku kwakhokelela kwingcamango yokuba kufuneka sibe phakathi.
Nangona kunjalo, le ngcamango iphosakeleyo kuba asiyiqondi iJometri yoMhlaba, kwaye asiyiqondi kakuhle imida yoMda.
Ngoko ke mfutshane kukuba asikho indlela ethembekileyo yokuxelela apho siseMhlabeni. Singaba kufuphi neziko - nangona oku kungenakwenzeka ukuba kunikwe iminyaka ye-Milky Way ngokumalunga nobudala bomhlaba-okanye mhlawumbi singaba phantse naphi na. Nangona siqinisekile ukuba asikho kufuphi nomda, nantoni na oko kuthetha, asiqinisekanga ngokwenene.
Ngoxa, ngokuqhelekileyo, yonke into ephela kwindalo iphela isuka kude nathi. (Okukuqala kwaphawulwa nguEdwin Hubble kwaye isiseko soMthetho kaHubble ), kukho iqela lezinto ezisondeleyo kuthi ukuba sisebenzisana nabo kwaye senze iqela.
IQela leNgingqi, njengoko liyaziwayo, linamaqela angama-54. Ininzi yale miqolo iyingqungquthela , kunye neenkalo ezimbini eziqhelekileyo ziyiMilky Way kunye ne-Andromeda eseduze.
I-Milky Way kunye ne-Andromeda ziqhutywe kwikhosi kwaye zikulindeleke ukuba zidibanise kwi-galaxy enye ibhilidi yee-bhiliyoni zeminyaka ngoku, mhlawumbi yenza i-elliptical galaxy enkulu.
Ufuna Ukwazi Njani I-Black Hole Swallows Stars? Buza ikhompyutha!
I-Local Interstellar Cloud: Uqwalaselo
Kukho iiPlanethi Ephapho!
I-Wormholes: Ziziphi na Ziyakwazi Ukuzisebenzisa?
Isizwe sakwaMasipala weeNqila-Iingcaphuno ezivela kwiNcwadi
I-Mass Mass Inkcazo
I-ELO Iingoma zee-80s
Uluhlu lwadlalwayo: Iingoma zokudumisa zamaKristu
Iindawo zokukhanyisa iiHununts kunye neMoya yazo
Oko i @ @ # $% &! Ngaba iGrawlix?
Iingoma eziphezulu zezulu kwi-1990s
Umlando we-Leap Year
Ubuchwephesha obutsha bokuThola iMinwe
Ukufunda okuHlanganisiweyo kunye neeHloni zeWebhsayithi
Yazi iNkundla Yakho Ephakamileyo
B - Iimveliso zoMzimba
I-Sample Grad School I-Letter Inkcazo nguNjingalwazi